कस्तो अवस्थामा हुन्छ मांगलिक योग, कसरी थाहा पाउने ? «
कस्तो अवस्थामा हुन्छ मांगलिक योग, कसरी थाहा पाउने ?
Published : 28 January, 2020 7:32 am
ज्योतिष शास्त्र अनुसार मांगलिक योगको अर्थ श्रेष्ठ वा शुभ योग भन्ने हो । तर, मांगलिक योगका कारण पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने भ्रम छरिन्छ ।
कोशीय आधारमा मांगलिक योग शब्दको अर्थ नराम्रो छैन, तर हामीकहाँ यो शब्द सुन्नासाथ विशेषतः विवाहयोग्य सन्ततिका अभिभावक र गृहिणीहरू झस्कने गर्दछन् । तर वास्तवमा मांगलिक योग भन्नासाथ आत्तिनु र झस्किनु आवश्यक छैन । यो अशुभ कारक योग पनि होइन ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मांगलिक योग भएको मान्छे निडर, प्रष्टवक्ता, साहसी, स्वाभिमानी, सेवाभावयुक्त र स्वावलम्बी हुन्छन् ।
विवाह भइसकेका दम्पतीको जीवनमा कलह, झैझगडा उत्पन्न भएमा केही ज्योतिषिहरुले मांगलिक योगका कारण भएको दाबी गर्छन् । मांगलिक योगको उचित व्याख्या र परामर्श दिँदैनन् । कतिपय ज्योतिषीले अवसरको फाइदा उठाउँदै कमाइ खाने भाँडो समेत बनाउने गरेको पाइन्छ ।
कसैको कुण्डलीमा मांगलिक योग छ वा छैन भन्ने जानकारी दिने ज्योतिषीय सूत्र यसप्रकार छ–
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
पत्नी हन्ति स्वभर्तारं भर्ता पत्नीं विनाशयेत्॥
अर्थ– जुनसुकै व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा जम्मा बाह्रवटा कोठा हुन्छन् । त्यसमध्ये पहिलो कोठालाई लग्न भन्ने गरिन्छ । लग्नबाट गन्दै क्रमशः दोस्रो, तेस्रो गर्दै बाह्रौं भावसम्मको गणना गरिन्छ । तिनै बाह्रवटा भावमध्ये पहि